नरुनु है मलाई सम्झेर, म सुतेँ सँधै सँधैलाई ….! | WWW.HATTERI.COM
← सरकारले भन्यो हाइकिङ नजानुस्…
हङकङको पहिलो हाइ स्पीड रेल आज उदघाटन …. →
नरुनु है मलाई सम्झेर, म सुतेँ सँधै सँधैलाई ….!
Posted on September 22, 2018 by admin123
नरुनु है मलाइ सम्झेर
म सुतेँ सँधै सँधैलाई
खुल्ला आकाश अोडेर, पुरै धर्ती अोछ्याई
म सुतेँ सँधै सँधैलाई …!
“काम साँची आफुलाई खानु साँचि अर्कालाई” २०१६ को डिसेम्बर तिर नै रिलिज गर्ने भनिएको गीतकार रबिन बान्तवा खालिङ राईको शब्द र डा. शरद सिंहाको एकल कम्पोजमा “आखिर के को लागि” ? एल्बम यतिकै त्येतिकै ढिला हुन गयो !
अब भने रिलिजको अन्तिम तयारी भईसकेको छ।
एल्बममा रहेको दोस्रो गीत “खुल्ला आकाश अोडेर ” राकेश खालिङ राईको स्वरमा करिब डेढ बर्ष पहिले रेकर्ड भएको थियो ! एल्बम ढिलाई भए पनि हिजो यु ट्यब च्यानल m6 flims मा रिलिज भएको छ , त्येसो त एल्बमको टाईटल गीत “आखिर के को लागि”? २०१६ मा नै रिलिज भइसको हो ।
हङकङमा गीत अभियान चलाएर “गीत सागर” नामक गीतको किताब २०१६ मा प्रकाशनमा ल्याईसकेका रबिन एक दार्शनिक हुन् भन्दा अतियुक्ती नहोला ! “जे गर्छु आत्म सन्तुष्टिको लागि गर्छु”
‘कसलाई सुनाउनु छ र ? आफै सुन्ने आनन्द लिने , भनिरहने रबिनको सरल शब्द भित्र गम्भीर बिचार दर्शन पढ्न र सुन्न पाइन्छ ।
सन्दर्भ र परिवेशलाई एउटा दर्शनयुक्त सन्देश छोड्ने उनी सँग कला छ, यसै सन्दर्भमा, उनी भन्छन् हङकङको एक “स्ट्रिट स्लिपर “को मृत्यूको समाचार पढेँ, मलाई भावुक बनायो ..! त्येसैलाई गीत लेखिदिएँ ! उनको किताबमा समावेश यो शब्द सिलगुडीका डा शरद सिंहाले थपक्क झिकेर धून भरेछन् र रबिनलाई पठाएछन् ..! त्येसपछि हामीले पनि सुन्ने अवसर पायौँ , डा सिंहा पेशेवर संगीतकार होइनन् , तर एक अब्बल संगीतकर्मी हुन् ,उनले पनि आत्म सन्तुष्टिकै लागि गरेका हुनु पर्दछ ! डा सिंहाले किताबको आफुलाई मन परेका शब्द आफू खुसी धून बनाउँदै रबिनलाई पठाउँथे त्येसो गर्दा गर्दै थुप्रै राम्रा – राम्रा शब्दहरुमा धुन बनाए , त्येसरी रबिन र शरदको सहकार्यमा एउटा एल्बम तयार भएको हो ! अरेञ्ज, मिक्स , माष्टर सम्पूर्ण काम सुमीत विश्वकर्मले गरेका छन् ।
– उनको गीतको यो अन्तराले मलाई एकदमै छुन्छ –
साँघुरो कोठा बारेर संसारै खुम्च्यायौ
कति जाल झेल गरेर
माटोलाई भाग लगायौ .!
मुठ्ठीमा किन सास फेर्नु ?
हावा सबै तिम्रै हो !
हङकङको कल्चरमा विवाह एकदमै महंगो पर्छ ! पैसाले जीवन साथी र बाँस किन्न नसके पछि, अभावै अभावमा एकल जीवन सडक र सव वे मा सुतेर जीवन अन्त्य गर्न बाध्य हुन्छन्, कति बेला प्राण जान्छ के थाहा ? धनीहरुलाई धनकै लोभ ! एउटा कोठालाई ३ वटा सम्म कोठा बनाएर पैसा असुल्ने हङकङको परिवेश यति पीडादायी छ , त्येसमा म आफू पनि पर्छु महिनाको ५/६ हजार हङकङ डलर तिरेर पनि ढोका देखि कोठाको भित्ता हुँदै बेड सम्म ठोक्किँदै पुग्नु पर्छ ….। कति असहज छ ..!
जे छ त्येस्तै छ , !
सुन्नेहरुको लागि यो गीत महत्वको छ , जसरी सुने पनि उपयोगी बन्छ ..!
तर एउटा अचम्मको कुरा के भने दार्जेलिङको सु-प्रसिद्ध अब्बल गायिका अनुपमाले हिजै मात्र रिलिज भएको “साइकल चढेर” भन्ने राजा पुनियानीको शब्द , समीर शर्मा र झुमा लिम्बूको स्वर र समीर शर्माकै कम्पोज, एरेञ्ज रहेको गीत हामीलाई ट्याग गरिन् …!
यसो खोलेर सुनेको, सुरुको आलाप र मुर्चुंगा सुन्ने बित्तिकै म झुक्किएँ, अरे ! खुल्ला आकाश जस्तो छ त ..! अनि ग्रुपमा साथीहरुलाई सोधेँ, रबिनले भने , हो रहेछ ! ह ह ह.. गरेर हाँसे , तर मलाई भने यो गम्भीर बिषय लाग्यो ! चित्त बुझेन ! डेढ बर्ष पहिले तयार भएको गीत रिलिज नभइ छ , यो त उल्टो अभियोग लाग्न सक्छ ,! सोच्दै गएँ
शरद सरलाई पनि त्यो गीत पठाएँ , केही साथीहरु पूजन लोहागण , हाङयुग अज्ञातहरुलाई पठाएँ हामी सुन्नेहरु जतिले पत्तो लगायौँ …!
अब के त ? रबिनको शब्दले भने जस्तै
“साँघुरो कोठा बारेर संसारै खुम्च्यायौ”
साँच्चिकै भौगोलिक परिधि त मान्छेले खुम्च्याए नै तर सिर्जनशील क्षमताको परिधि पनि खुम्चाएकै हो त ..? कुनै कुराको सिको गर्न पनि कला चाहिन्छ नि होइन र ..?
अब के हुन्छ मलाई थाहा छैन, यस्तो हुन या गर्न मिल्छ मिल्दैन ..? कि संयोग मात्र हो …? समय अभावको कारण पनि हतारिएर यति लेख्न मन लाग्यो ..!
– अन्त्यमा जे जसो भए पनि “खुल्ला आकाश” गीतमा समावेश सम्पूर्ण टिमलाई बधाईका साथ आभार छ !
– मनु कन्दङवा लिम्बू
म तराई हुँ - जुनु राना मगर
म अनागरिक, आफ्नै देश भित्र म टुहुरो हुँ मैले चाहिनँ, कुनै प्रमाण आफ्नै देशको नागरिक…
ए पवन उडाएर लैजाऊ मलाई - (फोटो कविता)
ए पवन उडाएर लैजाऊ मलाई बादल पारी मायालुको देशमा जसबाट स्पर्शको अपेक्षा गर्छु जहाँबाट घनिष्ठता…
"२२ वर्ष अघिको अपराधको लागि मलाई सजायँ देऊ"
एउटा ५४ वर्षे मानिसले आफूले २२ वर्ष अगाडि चोरीमा संग्लग्न भएको भनी आत्मसमर्पण गरेपछि अदालतले…
This entry was posted in Arts & Entertainment, Hong Kong. Bookmark the permalink.